Indlu yeeNdwendwe encinci kaCezar
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguCezar
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uCezar iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu encinci eyamkelekileyo nepholileyo kufutshane nendlu yeeNdwendwe ephambili. Ibonisa i-terrace entle enendawo enemibala, ikhitshi, indawo yokuhlala enoomatrasi aba-3 obutofotofo bomgangatho, igumbi lokuhlambela kunye ne-wifi yasimahla.
Indlu encinci yeendwendwe ibekwe ecaleni kwendlu yeendwendwe enkulu esembindini welali yaseBarouk. Unokufumana iindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu kunye nezinye izinto ezinomtsalane kunye nezixhobo malunga ne-10 ukuya kwi-15 mins kude nendlu.
Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-3, Iibhedi ekuthiwa zii-hammock eziyi-2
Ubumelwane bunemvakalelo yokukhululeka kunye nokuzola njengoko ukhuseleko nokhuseleko ziyinkxalabo yomntu wonke. Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwaye uzintywilisele kubomi bokwenyani beShouf kunye noluntu olwamkelekileyo lwasekhaya kunye nomoya ofudumeleyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Cezar
My main objective is to support local communities by developing and promoting Sustainable Tourism as innovative ideas in Rural and Eco Tourism, as well I have a Master degree in NGO management and Degrees in Marketing advertising and Marketing Communication
My main objective is to support local communities by developing and promoting Sustainable Tourism as innovative ideas in Rural and Eco Tourism, as well I have a Master degree in NG…
Sisoloko sifumaneka ngoncedo kwaye sikulungele ukuphendula kuwo nawuphi na umbuzo. Kananjalo singakwazi ukulawula iipakethe zokhenketho eShouf nakwiindawo ezikufutshane malunga nezinto ezinomdla kunye nezikhethwa ziindwendwe.